Iindaba -Ukuhanjiswa ngenqanawa kwenziwe ngokungenalusini kubugandaganda phantsi kweProjekthi yePetroleum yeSizwe yaseRussia
Ukuhanjiswa ngenqanawa kwenziwe ngokungenalusini kubugandaganda phantsi kweProjekthi yePetroleum yeSizwe yaseRussia
Ngo-Septemba-ikota yokuwa ezayo, ixesha lokuvuna elineziqhamo ezityebileyo kunye nokusasaza ivumba elimnandi! Ugandaganda ofaka umsebenzi onzima wabasebenzi beHBXG yeProjekthi yePetroli yaseRashiya ephumeleleyo yiHBXG ithunyelwe ngempumelelo kwintengiso yeCIS kwakhona!
Olu luhlobo lwesibini lokuthengwa kwethenda yokuthunyelwa kwe-TY165-3 uthotho lweebhulldozer zenkampani yasePetroleum yaseRussia. Inkampani yasePetroleum yaseRussia yanelisekile ngokusebenza kokusebenza kwebhetshi yokuqala ye-SWMC yohlobo lwe-TY165-3 uthotho lweebhulldozer, ngakumbi ezibalaseleyo ukusebenza kobushushu obuphantsi kunye nokuthembeka okugqwesileyo.
I-TY165-3 uthotho ugandaganda ngumsebenzi oqhelekileyo ugandaganda ophuhliswe yi-HBXG kwisiseko sokusetyenziswa koncedo lweCaterpillar's D6D ugandaganda kunye noncedo lokuhambisa lweKomatsu 's D55 ugandaganda. ngenkqubo yokudlulisa amandla enkulu kunye nokuthembela kunye nenkqubo yokuhambisa ethembekileyo. Isakhelo se-chassis esonyuselweyo siphucula ukubanakho komatshini uphela ukuze ziqhelane neemeko zokusebenza nzima.
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, ubhubhane we-COVID-19 usasazekile kwihlabathi liphela. Ngelixa usenza umsebenzi olungileyo kuthintelo lobhubhane kunye nolawulo, i-HBXG ihlawula kakhulu ukuphuculwa kolawulo lwangaphakathi, ukukhawulezisa ukuphuculwa kwemveliso kunye nolawulo lomgangatho, kugxila kwizikhalazo zabathengi, kuthatha inyathelo ngokukhawuleza, kuphucula inqanaba lenkonzo, kwaye kuphucula ukoneliseka kwabathengi. Ngeli xesha, umthamo wentengiso wentengiso ufumene ukukhula okuzinzileyo.